सनराइज खबर स‌ंवाददाता ५ कार्तिक मंगलबार, २०७६	१६:४६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख नहुँदा संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयकहरु प्रमाणित गर्ने काम नै रोकिएका छन् ।
संसद सचिवालयका कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित पाँच वटा विधेयक प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउने काम नै रोकिएको हो ।
सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने भएकाले संसदबाट पारित गरिएका ती विधेयकहरु प्रमाणीकरणको काम पनि रोकिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले सभामुख पद रिक्त हुँदा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको देश भित्र र बाहिर हुने औपचारिक कार्यक्रमहरु पनि रोकिएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले देश भित्र र बाहिर हुने औपचारिक कार्यक्रमहरु पनि रोकिएको बताएका छन् । त्यसैगरी सभामुख नहुँदा संसदीय समितिका बैठकहरु पनि अघि बढन सकेका छैनन् ।
संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त रहेको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
ठूलो सहमति : अब कर्मचारीको उमेर हदवन्दी ६० वर्ष
निजामती कर्मचारीकाे सरुवा चक्रीय प्रणालीमा
‘प्रमोशनको लागि नम्बर नपुगे मात्र कर्मचारी दुर्गम जान्छन्’
कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई संसदीय समितिकाे निर्देशन
२५ कार्तिक, २०७६
सरकारले भारतसँग सम्वाद थालिसक्यो : मन्त्री अर्याल